Ngaphambi kweholide, akufanele neze uchithe isikhathi esiningi namandla ukuze udale ikhono lobuciko ekhanda lakho ukuze uthinte labo abazungezile ngokubukeka kahle. Ukuqondiswa yizincomo zethu, ungafunda ngazo zonke izinwele zeholide ezifashisayo zezinwele ezimfushane futhi kalula ngemizuzu embalwa ukwenza isitayela sezintandokazi.
Imfihlo yezinwele zezinwele eziphumelelayo izinwele ezimfushane azixhomeki kakhulu ngesikhathi njengoba kusetshenziswa izinsiza ezikhethwe kahle. Lapho ubuchwepheshe bamuva busetshenziselwa emkhakheni wezinkinobho nemikhiqizo yokunakekelwa, kulula kakhulu ukwenza ukubeka ama-curls amafushane.
Izinzuzo zezinwele ezimfushane
Kungenxa izinwele ezimfushane ukuthi abanikazi abaningi be "braids eside" baphupha ngakho. Futhi akumangalisi - lezi zinwele zinezinketho eziningi zokubeka nokudweba.
Ubude bezinwele ezinjalo kugcizelela ngokuphumelelayo umzila othakazelisayo wezintambo kanye ne-nape, uvula izindlebe ezihle futhi ugcwalise ukujula kwamehlo - konke okunamangalisa kakhulu.
Izinzuzo zezinwele ezinqunywe okwesikhashana:
Kulula kakhulu ukuhlanza: ngokushesha omile, akudingi isikhathi esiningi sokubheka;
babe nokubukeka okunempilo: ukuphela okudaywe futhi okuphawulwe kuhlelwe ngokuhlelekile;
vumela njalo futhi kalula ushintshe izitayela zezinwele nezinwele zombala;
Inwele ngayinye ngayinye inezinwele ezimbili ezilula zezinwele ezimfushane: ikhanda elibushelelezi noma elincinci.
Izitayela zeHholide zezinwele ezimfushane
Kuboya bezinwele . Faka isicelo sezinwele ezimanzi isamba esincane semousse ye-styling. Ukuhlamba izinwele, ukomise isomisi sezinwele kanye nebhayisiki nxazonke, uphazamise amathiphu ngaphakathi. Uma izinwele zisondele, zomise, ziqondise ukugeleza komoya okuvela phezulu ngenhla, ukuze izintambo zibheke phambili. Bese ufafaza izinwele ezinhlangothini nasemuva kwekhanda nge-gel for styling, bese uyigubha ngeminwe, ubeke ngakwesobuso. Ukuthinta kokugcina ukupenda i-varnish kuzo zonke izinwele ukulungisa umphumela. Le ndlela yokuzijabulisa kufanele ibheke inhlanhla - lena yimfihlo yakhe. I-nuance ye-coquettish yi-bang ehlanganisa iso.
" Ukucasula . " Ngandlela-thile, phakathi kwemikhuba yakamuva yezimfashini ezweni lokugqoka izinwele, lokhu kukwenza izinwele ezimfushane kuthatha enye yezindawo eziholayo. Ukuze udale, udinga ukuphumula amasentimitha ayishumi endlebeni, bese usebenzisa ikhambu ebukhali, udwebe umugqa, uhlukanise izinwele kusuka ebunzini kuze kube umqhele. Bese uqede ngokucophelela izinsimbi zombili zombili. Ukwakha isithombe sokugubha umkhosi ukufaka i-agent epholisayo ngomphumela wokukhanya ozokwenza ubumnandi bube bushelelezi nokukhanya okukhulu.
Ngesitayela se-grunge . Ukuze uyidale, kufanele usule izinwele zakho ngesomisi sezinwele, uphonsa ikhanda lakho phansi - lokhu kuzokunika ivolumu efanele. Ngemuva kwalokho, ngokusebenzisa i-wax noma i-gel yokufaka isitayela, sikhetha amathiphu wezinwele, sikhetha izinhlamvu ngezikhathi ezithile. Ngalesi sitayela azikho izinhlangothi ezicacile nemithetho, udinga ukudala umqondo ovele uvukile. Into esemqoka ukuthi amathiphu abe nokubukeka kahle.
I-curl yocansi. Ukuze kudalwe izindwangu zengqondo, sihamba nge-forceps emihle izinwele zezinwele ezinhle. Okwamanje ngenkathi ama-curls asashisa, siwaphazamisa ngomunwe futhi sisebenzise ukungabonakali ukulungisa i-curl. Uma izinwele sezihlile phansi, susa ukungabonakali futhi ugubha ikhanda - izinwele zizofakwa emagcekeni omzimba. Ukwephula izilonda kwakulalele futhi kube nokubukeka okukhazimulayo, okubukeka kahle, kufanelekile ukusebenzisa i-varnish ne-glitter.
Ukuhlangana kobuhlobo. Ukwakha le hairstyle oyidingayo izinwele ezomile ezinomshini omile izinwele, besebenzisa iminwe yakho ukuyiphakamisa kancane empandeni. Khona-ke ikhamera elibukhali ukwenza ukuhlukanisa okungalingani, ukuvala kwangaphambili ukukhiya ngosizo lensimbi yokugubha, futhi izingxenye zokukhiya kufanele ziboshwe ngaphakathi. Ngakolunye uhlangothi, vala ilokhi nge-clamp.
Nakhu, izinwele zeholidi zezinwele ezimfushane. Khetha isithombe esifanele futhi uzodlula konke!
Izitayela zezinwele nezengezo ezincane
Okubaluleke kakhulu izinwele zezinwele nezinhle kungathintwa izinwele izesekeli - izimbambo, amabhandeshi, izinwele zezinwele, imidwebo yembali, ama-combs okuhlobisa, ikhanda elikhanyayo. Zonke lezi zinto ezincane zithwala amanothi emikhosi futhi ziyakwazi ukuhambisana nanoma iyiphi ikhanda elihle kakhulu.
Yini okufanele uyenze ngezinwele ezingavamile? Amathiphu womculi wezinwele
Iziphi izinwele zezinwele ezisenza sibe mncane?
Amasks wezinwele ezixubekile
I-Ombre on izinwele: inqubo yokudonsa ekhaya
Ukubetha izinwele ezinde
Ingulube igwetshwe ukhilimu omuncu
Konke mayelana nokuthi ukupheka kanjani
Indlela yokukhetha i-mascara ephelele ngokukodwa: imithetho emithathu eyinhloko
"Umama-umama" noma "umama-mama," ubani ongcono?
Indlebe evela enhlanzi ebomvu ngekhilimu
I-Blepharoplasty ingenye yezinto ezivamile kakhulu ebusweni
Indlela yokuba mncane futhi enhle
Ukuvikela isikhumba emakhazeni
I-Peanut Butter Smoothies